OMNI FOCUS ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးကျော်နေဝင်းနှင့် ဦးဇွဲနေဝင်းတို့အား အရေးယူပေးရန် ဦးတိုက် လျှောက?? - Yangon Media Group
ယာဉ်မောင်းကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ OMNI FOCUS ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးကျော်နေဝင်းနှင့် ဦးဇွဲနေဝင်းတို့နှစ်ဦးအား အရေးယူပေးရန် ဦးတိုက်လျှောက်ထားသည့်အမှုအပေါ် မေ ၂၅ ရက် ရုံးချိန်းတွင် သောင်ကြီးနယ်မြေ ရဲစခန်း၏ နှစ်ဖက်စစ်ဆေးချက်ကို လှိုင်သာယာမြို့နယ်တရားရုံးက ပုဒ်မတပ်သင့်၊ မတပ်သင့် ဇွန် ၁ ရက်သို့ ရုံးချိန်းပြန်လည်ချိန်းဆိုခဲ့သည်။
ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့နယ် ခုံသမာဓိအလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်ဟန်က ”ဒီနေ့ ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးကို ရုံးချိန်း ချိန်းဆိုပါတယ်။ တရားသူကြီးကနေကျင့် ၂ဝ၂ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်။ နယ်မြေခံ သောင်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်းက အမှုစစ်ဆေးချက်နဲ့ တရားလိုဘက်က စစ်ဆေးချက်ရယ်၊ စွပ်စွဲခံဘက်က စစ်ဆေးချက်ရယ် အဲဒါကို ခေါ်ပြောတာပါ။ အဲ့ဒီစစ်ဆေးချက်တွေကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဇွန် ၁ ရက်ကို ရုံးချိန်း ပြန်ချိန်းတယ်။ အဲဒီနေ့မှ ဘယ်လိုပုဒ်မတပ်ပေးမယ်ဆိုတာကို ပြောပါတယ်။ တပ်မရတဲ့ပုဒ်မဖြစ်ရင်ပလပ်မှာပေါ့။ တရားလိုဘက်က တော့ အဖြစ်မှန်အားလုံးကို တင် ပြထားပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယာဉ် မောင်းကိုအောင်မြတ်က လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့သာမန်ဝန်ထမ်းများအပေါ် ကိုယ်ထိလက်ရောက် မကျူးလွန်မိစေရန် စံနမူနာဖြစ် အောင်တိုင်ကြားခြင်းဟုဆိုသည်။ ”တရားဥပဒေအရ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘူးဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတယ်” ဟု ၎င်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ လှိုင်သာယာမြို့ နယ် ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးအနီးရှိ OMNI FOCUS ကုမ္ပဏီပိုင် YBS(20) ယာဉ်ရပ်နားစခန်းအတွင်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၈ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ဗိုလ်တထောင်မှ လှိုင်သာယာသို့ ပြန်လာသော ယာဉ်မောင်းကျော်မင်းထွန်း မောင်းနှင်သည့် YBS(20) ယာဉ်သည် ကားဝင်းအတွင်းသို့ အရောက် ဝပ်ရှော့မှထွက်လာသည့် ယာဉ် မောင်းအောင်မြတ် မောင်းနှင်သည့် YBS(20) ယာဉ်နှင့်ချိတ်မိခဲ့သဖြင့် ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးအား ယာဉ်မှုစစ်ရုံးတွင် အမှုတွဲအမှတ် ပ/ ၂၁။ ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်မှု ပုဒ်မ-၂၇၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်တရားစွဲထားကြောင်း OMNI FOCUS (20) ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းမတော်တဆမှုကြောင့် ကားမှန်အချို့ ကွဲခဲ့သည့်အပေါ် ယာဉ်မောင်းအောင်မြတ်အား ယာဉ်ပိုင်ရှင် ဦးကျော်နေဝင်းနှင့် ၎င်း၏ညီ ဦးဇွဲနေဝင်းတို့နှစ်ဦးက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ၎င်းတို့နှစ်ဦးအား အရေးယူပေးရန် ယာဉ်မောင်း အောင်မြတ်၏ တိုင်ကြားမှုကို လှိုင်သာယာမြို့နယ် သောင်ကြီးနယ် မြေရဲစခန်းမှ လှိုင်သာယာမြို့နယ် တရားရုံးသို့ မေ ၁၁ ရက်က ဦးတိုက် လျှောက်ထားခဲ့ရာ ယင်းအမှုကို ကျင့် ၂ဝ၂ ဖြင့် တွဲဖက်မြို့နယ်တရား သူကြီး(၁)က လက်ခံထားသည်။
အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် Peugeot ၏ မိုဒယ်မြင့်ကားများ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း အခမ်းအနား က??
‘Rambo’ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ ဗတ်ခ်ျနာ ကွယ်လွန်
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီတို့ကို ??
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ မန္တလေးတောင်ခြေ၌ မြန်မာ့ရုပ်သေးပွဲ ဇာတ်ရုံသစ် ဖွင့်လှစ်